ပျက်လုံးများ - အင်္ဂလိပ်ပျက်လုံးများ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဥပမာများ
ဘာသာစကားများ Key ကိုသတ်မှတ်ချက်များဝေါဟာရ
by ရစ်ချတ် Nordquist
တစ်ဦးကပျက်လုံးများတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် စာသားကို အဆိုပါဝိသေသတုပပြုလုပ် စတိုင် တစ်ခုစာရေးဆရာသို့မဟုတ်ရုပ်ပြအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အလုပ်။ နာမဝိသေသန: parodic ။ အလွတ်သဘောတစ် Spoof အဖြစ်လူသိများ။
စာရေးသူ မှာ William H. ဓာတ်ငွေ့ အများဆုံးကိစ္စများတွင် (စာသားတစ်ဦးကဘုရားကျောင်း, 2006) "ပျက်လုံးများလနျ့စရာအလှနျယင်း၏သားကောင်များ၏ထူးချွန်ဆုံးနဲ့နှောင့်အယှက် features တွေ ပို. " အဲဒီကဤသို့။
Play Store မှာစကားများ: Recreational ဘာသာဗေဒမှတစ်ဦးနိဒါန်း
ရောဘတ် Benchley က "ခရစ္စမတ်နေ့လည်တွင်,"
"ငါဘယ်လိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒါဟာရမညျလော" မက်စ် Beerbohm အားဖြင့်
"ဂျက်နှင့် Gill: တစ်ဦးကကဲ့ရဲ့ဝေဖန်" ဟုဂျိုးဇက်က Dennis အားဖြင့်
ယောနသန်ဆွစ်ဖ်က "တစ်ဦး Broomstick အခါတစ်ဦးကတှေးတောဆငျခွ"
ရောဘတ် Benchley အားဖြင့် "လ၏လူကြိုက်အများဆုံးစာအုပ်"
"ရှိတ်စပီးယားရှင်းလင်းချက်: မိုက် Extreme မှအောက်ခြေမှတ်ချက်များ၏စနစ်အပေါ်သယ်ဆောင်," ရောဘတ် Benchley အားဖြင့်
ဖိလိပ္ပုသည် Guedalla အားဖြင့် "တချို့သမိုင်းပညာရှင်တွေက"
"သင်!" ရောဘတ် Benchley အားဖြင့်
ဂရိကနေ "အနားမှာ" သို့မဟုတ် "ကောင်တာ" အပေါင်း "သီချင်း"
"[: P] arody သာမူရင်းကိုသိသောလူမြားအပျေါအလုပ်ဖြစ်တယ်, သူတို့အသေးစိတ်အတွက်အတုယူ၏ကျယ်ပြန့်လေဖြတ်သကဲ့သို့ကောင်းစွာထိနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကတရင်းတနှီးအလုံအလောက်သိရန်ရှိသည်။ လူဦးပျက်လုံးများအတွက်ယူခံစား၏အပိုင်းခံစားချက်များ၏ခံစားဖြစ်ပါသည် အသိဉာဏ်မလူတိုင်းဟာသရရှိသွားတဲ့။ သငျသညျပြီးသားမက်မွန်အကြောင်းကိုမသိကြပါလျှင်, သင်သုတ်သင်မှာရယ်မောမည်မဟုတ်ဒါဟာ bookworms ဘို့စိတ်ကူးယဉ်ဘေ့စ်ဘောရဲ့ "။ ။
(လူးဝစ် Menand "ပျက်လုံးများပျောက်ဆုံးသွားသော။ " ဒီ New Yorker, စက်တင်ဘာ 20, 2010)
ရောဘတ် Southey ကကဗျာ၏ Lewis ကကာရိုးရဲ့ပျက်လုံးများ
" '' သင်, ခမညျးတျောဝီလျံဟောင်းဖြစ်ကြသည် '' လုလင်အျောဟစျပါ၏
သငျသညျမီးခိုးရောင်များမှာကျန်ရစ်သည့် '' အဆိုပါအနည်းငယ်သော့ခလောက်,
သငျသညျ Hale, ခမညျးတျောဝီလျံများမှာ - တစ်ဦးချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာအဘိုးအို:
ယခုငါဆုတောင်းပဌနာ, ငါ့ကိုအကြောင်းပြချက်ပြောပြပါ။ ''
" 'ငါ့အသက်ငယ်သောကာလ၌,' 'ခမညျးတျောဝီလျံ replied,
'' ငါလူငယ်အစာရှောင်ခြင်းပျံသန်းမယ်လို့ remember'd
ထိုအ Abus'd ငါ့ကျန်းမာရေးနှင့်ပထမဦးဆုံးမှာငါ့အသန်စွမ်း,
ငါနောက်ဆုံးမှာသူတို့ကိုမလိုအပ်လိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှသော။ '' ။ ။ ။ "
(ရောဘတ် Southey "ဟု The ဟောငျးက Man ရဲ့ Comfort နဲ့ဘယ်လိုသူကသူတို့ကိုရရှိခဲ့သည်" 1799)
" '' သင်, ခမညျးတျောဝီလျံဟောင်းဖြစ်ကြသည် '' လူငယ်လေးကပြောပါတယ်,
သို့သော်လည်းသင်သည်ခွားမသင့်ရဲ့ head-- ပေါ်မှာရပ်
သင်ကမှန်သည်, သင့်အသက်အရွယ်မှာထင်သလား '
" 'ငါ့လူငယ်ခုနှစ်တွင်' 'ခမညျးတျောဝီလျံကသူ့သားမှ replied,
'' ငါကဦးနှောက်ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ, ကြောက်ကြ၏
အဘယ်ကြောင့်တဖန်ငါနဲ့ပြန်လုပ်ပါ။ '' ။ ။ ။ "
(Lewis ကကာရိုး, Wonderland ထဲမှာအဲလစ်ရဲ့ Adventures ကို, 1865)
" 'မိမိ, Frito ၏ကောင်လေးတစ်ယောက်,' bleary-eyed နတ် Clubfoot '' တစျခုကြောင်း, တစ်ဦး woodpecker သကဲ့သို့အရူး။ ', ကဆက်ပြောသည် ဤသည်ကိုအခြားသူများအကြား, ဓားမနောက်၏ဟောငျး Poop ကစိစစ်ခဲ့သည်။ ငယ်ရွယ် Frito မတွေ့မမြင်ခဲ့တဲ့အတွက်, Boggietown ၏ကောက်လမ်းများမှတဆင့်သောအခါ, အမှတ်တမဲ့လမ်းလျှောက်, ပန်းပွင့်နည်းနည်းရုံတင်ဆောင်ခြင်းနှင့် '' အမှန်တရားနှင့်အလှအပ '' အကြောင်းကိုကွံနှင့်တူသောရီစရာဒဏ်ဍာရီထဲကအ blurting '' Cogito ergo boggum? ''
( H. မုတ်ဆိတ်, အဆိုပါဟားဗတ်တက္ကသိုလ် Lampoon, လက်စွပ်၏ယောက်ျားကိုဘွားမြင် 1969)
နာမထိုက်တန် "[M က] ost ပျက်လုံးများက၎င်း၏ပစ်မှတ်ဆီသို့ ambivalent နေသည်။ ဤ ambivalence အဆိုပါ parodied စာသားဝေဖန်မှုများနှင့်ကိုယ်ချင်းစာတဲ့အရောအနှော, ဒါပေမယ့်လည်းအသစ်သောအရာတစ်ခုခုသို့များ၏ဖန်တီးမှုတိုးချဲ့မသာပါဝငျနိုငျသညျ။ တိကျသောလက္ခဏာများအများစုမှာအခြားအ ရုပ်ပြမူရင်းနှင့်ပျက်လုံးများအကြား incongruity, နှင့်၎င်း၏ဟာသက၎င်း၏ပစ်မှတ်မှာအတူနှစ်ဦးစလုံးရယ်မောနိုင်သည့်အတွက်လမ်း၎င်း၏ဖန်တီးမှုအပါအဝင်ပျက်လုံးများ၏, ထို parodist သည့်ပျက်လုံးများ၏အရာဝတ္ထုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစေသည်ရသောလမ်းကိုမှခြေရာခံစေခြင်းငှါ အဆိုပါပျက်လုံးများရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏။ "
(မာဂရက်အေနှင်းဆီ, ပျက်လုံးများ:, ရှေးဟောငျးအီမော်ဒန်နှင့် Post-Modern ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း, 1993 ။ )
ခြောက်ပျက်လုံးများ Ernest Hemingway
- "ထိုလှည့်ကွက်အများစုမှာကောင်းသောလှည့်ကွက်ခဲ့ကြသူတို့ကအထူးသဖြင့်ရေတိုဇာတ်လမ်းများထဲမှာခဏဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ခဲ့ Ernest ရာ့-ခြံ dash အတွက်စတိုင်ခဲ့ပေမယ့်သူကတာရှည်ပစ္စည်းပစ္စယများအတွက်လေတိုက်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါနောက်ပိုင်းလှည့်ကွက်မအမှုကိုပြု၏။ ။ ဒါကြောင့်အကောင်းကြည့်ရှု။ သူတို့ကအတူတူပင်လှည့်ကွက်ခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့ကမဆိုပိုပြီးလတ်ဆတ်မဟုတ်ကြနှင့်ဘာမျှမကြောင်းမှာဟောင်းနွမ်းသွားပြီတဲ့လှည့်ကွက်ထက်ပိုဆိုးသည်။ သူသည်ဤသိတယ်ဒါပေမဲ့သူမဆိုသစ်ကိုလှည့်ကွက်တီထွင်နိုင်ဘူး။ "
(Dwight Macdonald, အမေရိကန်သီးနှံဆန့်ကျင်, 1962)
- "ငါခေါင်းတိုင်ရှိရာအခန်းသို့ထှကျသှားအဆိုပါအနည်းငယ်သာလူကိုမီးဖိုထဲဆင်း လာ. နှင့်အခန်းသို့တိုးမြှင်သူသားမွေးအတွက်အားလုံးဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်သူ၏အဝတ်မီးဖိုထဲကနေပြာကိုနှင့်ကျပ်ခိုးနှင့်ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်ကသူ့နောက်ကျောတွင်ခဲ့သည်တစ်ဦး။ ။ ။ ။ လေးကိုကဲ့သို့သူ၏နှုတ်သည်အနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်။ မျက်စိတော် twinkled ။ သူ့ပါးပြင်နှင့်နှာခေါင်းအနီရောင်တို့သူချိုရှိခဲ့ပါတယ်။ အထဲတွင်ကစားစရာရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦး peddler ရဲ့ဗူးနဲ့တူထုပ်ပိုး, သူ၏မုတ်ဆိတ်အလွန်အဖြူခဲ့သည်။ သူ၏သွားကြားတစ်ဦး stumpy ပိုက်ခဲ့ ။ ပိုက်မှမီးခိုးလွမ်းသူ့ပန်းခွေ၌သူ၏ခေါင်းကိုဝန်းရံ။ သူကရယ်နှင့်သူ၏ဝမ်းခါ။ ဒါဟာအနီဂျယ်လီတစ်ပန်းကန်နဲ့တူခါ။ ငါရယ်။ သူကသူ့မျက်စိမျက်လုံးမှိတ်ပြတယ်, ထို့နောက်သူသည်သူ၏ဦးခေါင်းတစ်ခုလှည့်ကွက်အပ်ပေးတော်မူ၏။ သူမ ဘာမှမပြောပါ။ "
(ယာကုပ် Thurber "ဟုအဆိုပါ Ernest Hemingway ထုံးစံ၌စိန့်က Nicholas () မှစ. သို့အလည်တစ်ခေါက်။ " ဒီ New Yorker, 1927)
- "ငါသန်းခေါင်ဝန်းကျင် Searchlight သို့လှိမ့်နှင့်အထက်ဂတ်စ်ကနေစီးနင်းပြီးနောက်အအေးတစ်ဦးရရှိရန် rosy ရဲ့ဘီယာပူးတွဲသို့လမ်းလျှောက်သူငါမြင်ပထမဦးဆုံးတစျခုဖွစျသညျကျွန်မသူ့ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ထိုအပြားအပြာမျက်စိနှင့်နောက်ကျောငါ့ကိုငေးကြည့်။ ။ ။ သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကိုပခုံးကနေ armless ချိတ်ဆွဲနေစဉ်သူကသူ့ကောင်းသောညာဘက်လက်မောင်းနှင့်ငါ့ကိုမင်္ဂလာပါလှိုင်း၏ကြင်နာပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ သူကကောင်းဘွိုင်များကဲ့သို့တက်ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ "
(ရှားစောင်းပင်ဂျက် "ဟု The One-လက်နက်ကိုင်ဒမြ," 2006 "မကောင်းပါ Hemingway" ပြိုင်ဆိုင်မှု)
- သူမွန်းတည့်အချိန်၌ဆင်းသက်တော်မူခြင်းနှင့်လေးဆယ်-ပဉ္စမလမ်း၏စည်းချက်-up, လမ်းဘေးအပေါ်အရှေ့ဝှေ့အဖြစ် "ဤသူကားငါ၏နောက်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့စစ်မှန်တဲ့သာမုန့်ညက်ဖြစ်ပါသည်, မစ္စတာ Pirnie ထင်ရုံရှေ့သူ့ကိုဧည့်ကြိုစားပွဲခုံကနေမိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ။ ငါတံတောင်ဆစ်၏ကောက်န်းကျင်အထိ fleshed အနည်းငယ်, Pirnie ထင်ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ငါကောင်းသောအခက်အခဲ။ "
(eb အဖြူရောင် "ဟုအဆိုပါလမ်းတစ်ဝှမ်းနှင့်ကင်စ။ " ဒီ New Yorker, အောက်တိုဘာ 14, 1950)
- "ကျနော်တို့ကအဲဒီနှစ်စပိန်၌ကြီးသောပျော်စရာခဲ့ရပြီးကျနော်တို့ခရီးထွက်ခြင်းနှင့်ရေးသားခဲ့သည်များနှင့် Hemingway ငါ့ကိုတူနာငါးငါးဖမ်း ယူ. လေးသံဗူးဖမ်းမိခြင်းနှင့်ကျွန်တော်ရယ်နဲ့ကျွန်မ Gertrude Stein နှင့်အတူမေတ္တာ၌ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါကဗျာတစ်စာအုပ်လှူသောကြောင့်, အဲလစ် Toklas ငါ့ကိုမေးသော် သူမ၏သူတို့ TS Eliot ရဲ့ခဲ့ကြခြင်းနှင့်ငါဟုတ်ကဲ့, ကျွန်မသူ့ကိုချစ်ပေမယ့်သူမအကြှနျုပျအဘို့ဝေးလွန်းအသိဉာဏ်ကြီးအဲလစ် Toklas သဘောတူညီခဲ့ပြီးတော့ကျနော်တို့တချို့လက်ဝှေ့လက်အိတ်ပေါ်တွင်တင်နှင့် Gertrude Stein, ငါ့နှာခေါင်းကိုဖဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအလုပ်မလုပ်ဘယ်တော့မှနိုင်ကပြောသည်သော်လည်းရန် "
(ဒါရိုက်တာ Woody Allen, "တစ်ဦးကနှစ်ဆယ်မှတ်ဉာဏ်။ " ဒီရူးကာကွယ်ရေး, 2007)
- "နှောင်းပိုင်းနေ့လည်ခင်းခုနှစ်တွင်ပြတိုက်ရှိသေးပေမယ့်သူမဆိုကိုပိုမိုပြုလုပ်မယ့်မခံခဲ့ရထိုသို့နေ့လည်ခင်းလန်ဒန်မြို့တွင်မြူဆိုင်းခဲ့မှောင်မိုက်စောစောစီးစီးသညျ လာ. ထိုအခါဆိုင်များပေါ်တွင်သူတို့အလင်းအိမ်လှည့်, ထိုသို့အားလုံးညာဘက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။ ။ သငျသညျအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မြူတာမမွငျနိုငျသော်လည်းအောက်စဖို့လမ်းကိုဆင်း, ပြတင်းပေါက်အတွက်ရှာဖွေနေ။ "
(ဒါဝိဒ်သည် Lodge, ဗြိတိသျှပြတိုက်, 1965 Down ကျဆင်းလာသည်)
"တစ်လမ်းမှာ, သူတို့ကိုယ်သူတို့သူတို့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အတွက်ပျက်လုံးများသည်အဘယ်အရာကိုသိရှိနိုင်ဖို့စာရေးဆရာများဘို့မဖြစ်နိုင်ပေမည်။ သူကတောင်ကစဉ်းစားရန်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ။ ။ ။
"တစျခုမှာမဆိုကောင်းပါတယ်သူကိုမဆိုစာရေးဆရာတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောရှိကြောင်းဆိုပါစို့မယ်လို့ အသံသည် ၏ --distinctive features တွေ syntax သို့မဟုတ် ဝေါဟာရ ။ - ထို parodist အားဖြင့်အပေါ်သိမ်းဆည်းရမိနိုင်သည့်သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကို"
(ဒါဝိဒ်သည် Lodge, သိစိတ်ကိုနှင့် Novell မှာ "အကြောင်းတစ်ဦးကစကားပြောထင်" ။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း, 2002)
"သန့်စင်သောပျက်လုံးများသက်သက်သာကပ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်၌အဘယ်သူမျှမအရှက်ကွဲရှိပါသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်မိခင်အတွင်းကပ်ပါးကောင်အဖြစ်ဘဝကိုစတင်ဖို့နှင့်စာရေးဆရာများအက္ခရာများ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းတုပသူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုစတင်။ "
(ယောဟန် Updike "Beerbohm နှင့်အခြားသူများ။ " ဌန်စကားပြေ။ အဲလ်ဖရက်အေ Knopf, 1965)
လိုက်တယ်အယ်လ် Yankovic ရဲ့ကို C hamillionaire ပျက်လုံးများ
"ငါသည်အဖြူနှင့် nerdy ပေါ့, ငါ့ကိုကြည့်ပါ
သို့သော်ယခုအထိထိုလူအပေါင်းတို့သည်ငါသိပ်အဖြူနှင့် nerdy တယ်ထင်
"ငါ့အတန်းထဲတွင်ပထမဦးစွာဤနေရာတွင် MIT ကမှာ
ကျွမ်းကျင်မှုတယ်, ငါက D & D ကိုမှာချန်ပီယံပေါ့
MC Escher - ငါ့အကြိုက်ဆုံး MC င်
သင့်ရဲ့ 40 သိမ်းဆည်းထားပါ, ကိုယ့်အနေနဲ့ Earl Grey ကလက်ဖက်ရည်ရှိပါလိမ့်မယ်။
အကြှနျုပျ၏ MySpace စာမျက်နှာအားလုံးလုံးဝထွက် pimped ဖြစ်ပါတယ်
လူတို့သည်လည်းငါ့ထိပ်တန်းရှစ်နေရာများအတွက် 'beggin တယ်။
Yo, ငါတစျထောငျသောနေရာများမှ pi ကိုသိရ
(ထူးဆန်းအယ်လ် Yankovic "အဖြူရောင်နှင့် Nerdy" - Chamillionaire အားဖြင့် "Ridin ''" ၏ပျက်လုံးများ)
Pronunc iation: Par-uh-Dee
သမ်မာကမျြး Grammar (WG ကို)
ဒါဟာတစ်ဦးအငြင်းအခုံစဉ်အတွင်းတစ်ဦးဆိုနေ Make ဖို့ဘာဆိုလိုသနညျး
အင်္ဂလိပ် Grammar အတွက်အတိတ် participle
အိန္ဒိယအင်္ဂလိပ်, AKA အမှန်စင်စစ်
ညံ့ဖျင်းသောစီမံရေး၏5အားနည်းချက်များ
ကော့စတစ်ဂစ်တာများအတွက်ထိပ်တန်း 70 သီချင်းများ
ပထမကမ္ဘာစစ်: Meuse-Argonne ထိုးစစ်
ထိုသို့သောကောင်းမွန်သော Idea စနေနေ့မေးလ် Delivery ၏အဆုံးဖြစ်သနည်း
အဆိုပါထိပ်တန်း 25 သဒ်ဒါစည်းမျဉ်းများ
ကိုလိုနီခေတ် Revival အိမ်များနှင့် Neocolonial အိမ်များ
Group မှတွေ့ဆုံမေးမြန်း: ဘယ်လို Group မှတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုနှင့်အတူဖြေရှင်းနည်း
ပလေတို - ဆုံးအရေးကြီး Philosophers တစ်ခုမှာ
အနုမြူ Radius ကိုအဓိပ္ပာယ်နှင့် Trend
အဆိုပါ Theoria Philosophiae Hermeticae မှသည် Rebis
Cheerleader Love ဒါက5ကို Creative ဂုဏ်ပြုပါရစေ
ဂျူရီ Art Show
မိဖုရားကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ